Iyini Inethiwekhi Yokulethwa Kokuqukethwe (CDN)? | Martech Zone
Yize izintengo ziqhubeka ukwehla ekubanjweni nakumkhawulokudonsa, kusengabiza kakhulu ukusingatha iwebhusayithi kungxenyekazi yokubamba ye-premium. Futhi uma ungakhokhi kakhulu, kungenzeka ukuthi isayithi lakho lihle kancane - ukulahlekelwa ngamanani akho abalulekile ebhizinisi.
Njengoba ucabanga ngamaseva wakho abamba isiza sakho, kufanele abekezelele izicelo eziningi. Ezinye zalezo zicelo zingadinga ukuthi iseva yakho ixhumane namanye amaseva e-database noma ama-interface wesicelo sohlelo lwesithathu (ama-API) ngaphambi kokwenza ikhasi elinamandla.
Inqwaba kubasebenzisi nakule seva ingangcwatshwa kungazelelwe. Ngasinye salezi zicelo sithatha isikhathi. Isikhathi sibaluleke kakhulu - noma ngabe umsebenzisi ulinde ikhasi elizolayishwa noma i-bot yenjini yokusesha eza ukuzokhipha okuqukethwe kwakho. Zombili lezi zimo zingalimaza ibhizinisi lakho uma isiza sakho sihamba kancane. Kuyintshisekelo yakho ukugcina amakhasi akho ekhanya futhi eshesha - ukuhlinzeka umsebenzisi ngesiza esisheshayo kungakhuphula ukuthengisa. Ukunikeza iGoogle ngesiza esisheshayo kungathola amakhasi akho amaningi afakwe enkombeni futhi atholakale.
Ngenkathi siphila ezweni elimangalisayo elinengqalasizinda ye-Intanethi eyakhelwe ku-fiber lokho kungasasebenzi futhi kushesha ngendlela emangalisayo, i-geography isadlala indima enkulu esikhathini esithathayo phakathi kwesicelo esivela kusiphequluli, ngama-routers, kusikhungo sewebhu… futhi emuva.
Ngamazwi alula, lapho i-web server yakho iqhubeka ivela kumakhasimende akho, iwebhusayithi yakho ihamba kancane kubo. Impendulo ukusebenzisa a inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe.
Ngenkathi iseva yakho ilayisha amakhasi akho futhi ilawula konke okuqukethwe okunamandla futhi API izicelo, inethiwekhi yakho yokulethwa kokuqukethwe (i-CDN) ingagcina izinto ezinqolobaneni kunethiwekhi esatshalaliswa kuzikhungo zedatha emhlabeni wonke. Lokhu kusho ukuthi amathemba akho eNdiya noma e-United Kingdom angabuka isiza sakho ngokushesha okukhulu njengezivakashi zakho phansi komgwaqo.
U-Akamai Uyiphayona ku-CDN Technology
Izindleko zama-CDN zingahluka zisuke kumahhala ziye ezinqabeni kakhulu ngokuya ngengqalasizinda yazo, izivumelwano zezinga lesevisi (ama-SLAs), ukukhubazeka, ukubuyela emuva, futhi - nesivinini sazo. Naba abanye babadlali abasemakethe:
I-Cloudflare kungaba enye yama-CDN athandwa kakhulu laphaya.
Uma uvuliwe WordPress, Jetpack inikeza i-CDN yayo enamandla kakhulu. Sisingatha isiza sethu ku ligcina uthi lokuphotha luzungeza ofaka i-CDN nensizakalo.
I-StackPath CDN inketho elula yamabhizinisi amancane angahlinzeka ngokusebenza okuhle.
Ama-Amazon CloudFront ingahle ibe yi-CDN enkulu kunazo zonke ene-Amazon Simple Storage Service (S3) njengomhlinzeki we-CDN ongabizi kakhulu njengamanje. Siyisebenzisa futhi izindleko zethu zivele zingaphezulu kwama- $ 2 ngenyanga!
Amanethiwekhi we-Limelight or Akamai Amanethiwekhi athandwa kakhulu esikhaleni sebhizinisi.
Isithombe kusuka Amanethiwekhi we-Akamai
Ukulethwa kwakho kokuqukethwe akudingeki kukhawulelwe ezithombeni ezimile, noma. Ngisho namanye amawebhusayithi ashukumisayo angakhonjiswa ngama-CDN. Izinzuzo zama-CDN ziningi. Ngaphandle kokwenza ngcono ukubambezeleka kwesiza sakho, ama-CDN anganikeza ukukhululeka kumithwalo yakho yeseva yamanje nokuqina kahle ngaphezu kwemikhawulo yehardware.
Ama-CDN asezingeni lebhizinisi avame ukungafuneki futhi anezikhathi eziphezulu futhi. Futhi ngokulayisha ithrafikhi ku-CDN, ungathola nokuthi izindleko zakho zokubamba kanye ne-bandwidth ziyehla kanye nokwenyuka kwemali engenayo. Hhayi utshalomali olubi! Ngaphandle kwe- Ukuminyaniswa kwesithombe, ukuba nenethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokusebenzela isiza sakho ngokushesha okukhulu!
Ukudalulwa: Singamakhasimende kanye nezixhumanisi ze I-StackPath CDN futhi ngiyithande le nsizakalo!
Tags: akamaiAmanethiwekhi we-Akamaiamazon ngaphambiliCdnngaphambili kwefuinethiwekhi yokulethwa kokuqukethweindlela yokwenza isayithi lakho lisheshei-jetpack cdnukukhanyaamanethiwekhi wokugqamamaxcdnukunciphisa isikhathi sokulayishashesha isizakuyiniyini i-cdniyini inethiwekhi yokulethwa kokuqukethweWordPress
May 8, 2012 ku-7: 13 PM
Ngokudilizwa ngokwengeziwe kuma-CDN ukuqinisekisa ukuthi isikhathi esengeziwe esiqhubekayo ungasebenzisa isu le-Dual-CDN Strategy. Ngokuyisisekelo ungaba nokulinganisa umthwalo phakathi kwama-CDN amabili ngasikhathi sinye. Ungathola imininingwane eminingi ngayo ngokubheka leli sayithi.